Oge ngwụcha izu na ụmụaka | Akụkọ Njem
Izu ụka ngwụsị izu na ụmụaka
Maria | | Getaways, Iso umuaka eme njem
Oge izu ụka bụ ohere zuru oke iji soro ụmụaka pụọ. Ọ baghị uru n ’oge afọ. N'ezie, ịkwesighi ịgafe oke ma ọ bụ tinyekwuo mmefu n'ihi na mpaghara Iberian anyị na-achọta ọtụtụ nhọrọ dị egwu maka ngwụsị izu na ụmụaka.
Ndị a bụ ụfọdụ ebe pụrụ iche iji gaa n'oge ngwụsị izu na ụmụaka. Na-eso anyị?
1 Dinópolis na Teruel
2 Oceanogràfic na Valencia
3 Oflọ nke Ratoncito Pérez na Madrid
4 Egwu na Granada
Dinópolis na Teruel
Dinosaurs dị adị ma Teruel maara ya nke ọma. Dinópolis bụ ogige isiokwu pụrụ iche na Europe nke enyere maka paleontology na dinosaurs, nke achọtara ihe dị mkpa na mpaghara Aragon a.
Kemgbe anyị banyere Dinópolis Teruel ọ dị ka anyị akwagala na Jurassic Park. Anyị na-amalite njem na montage "Njem na oge", ebe a isiokwu njegharị e mere jupụtara pụrụ iche utịp na animatronic dinosaurs na-enye iberibe ụjọ.
N'aka nke ozo, Dinópolis nwekwara ebe ndebe ihe mgbe ochie nke n’egosiputa ihe ochie, ihe okike, egwuregwu na ihe nlere na-achikota iji nye uzo di egwu site na paleontology. Enwekwara ike ikiri ka ndị ọkà mmụta sayensị na ndị na-amụ banyere okike na-arụ ọrụ.
Nleta na Museum na-eduzi mgbe niile na ụlọ ọ bụla ha ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe nzuzo nzuzo nke Dinópolis na-ezo. Ihe kachasị mma bụ na ọ nwere ebe dị iche iche na ihe omume ga-atọ ụmụaka ụtọ dị ka T-Rex animated hyper-realistic ma ọ bụ njem na mmalite nke mmadụ.
Oceanogràfic na Valencia
Oceanogràfic nke Obodo Arts na Sayensị nke Valencia bụ aquarium kachasị ukwuu na Europe, ọ na-anọchitekwa usoro okike dị ukwuu na mbara ala. N'ihi oke ya na nhazi ya, yana mkpokọta ihe ọmụmụ dị mkpa, anyị nwere aquarium pụrụ iche n'ụwa ebe, n'etiti anụmanụ ndị ọzọ, dolphins, shark, seals, ọdụm oke osimiri ma ọ bụ ụdị dị ka ịmata ihe belugas na walruses, ihe pụrụ iche ụdị nke a pụrụ ịhụ na akwarium Spanish.
Achọpụtara ụlọ Oceanogràfic nke ọ bụla nwere gburugburu mmiri ndị a: Mediterranean, Wetlands, Temperate and Tropical Seas, Oceans, Antarctic, Arctic, Islands and Red Sea, na mgbakwunye na Dolphinarium.
Ebumnuche dị n'azụ oghere a pụrụ iche bụ maka ndị ọbịa na Oceanográfic iji mụta ihe ndị bụ isi nke ahịhịa na mmiri na mmiri site na ozi nkwanye ùgwù maka nchekwa gburugburu ebe obibi.
Oflọ nke Ratoncito Pérez na Madrid
Foto | Ok edetu
Akụkọ banyere Tooth Fairy na-agwa na oke a na-ahụ n'anya na-elekọta ịnakọta obere ezé mmiri ara ehi nke ụmụaka mgbe ha dara ịhapụ ha mkpụrụ ego n'ọnọdụ mgbanwe n'okpuru ohiri isi.
El Ratoncito Pérez sitere na echiche nke okpukpe Luis Coloma bụ onye mepụtara akụkọ na òké dị ka onye na-akwado ya iji mee ka Eze Alfonso XIII dị jụụ mgbe ọ nwụsịrị otu n'ime ezé mmiri ara ehi ya. Dabere na akụkọ mgbe ochie, oke ahụ biri n'ụlọ dị na Arenal Street na Madrid, n'akụkụ Puerta del Sol ma dị nso na Palacio de Oriente.
Taa, na ala mbụ nke nọmba 8 nke okporo ámá a, bụ -lọ-Museum nke Ratoncito Pérez nke a ga-eleta kwa ụbọchị ma e wezụga Sunday.
Egwu na Granada
Sierra Nevada Ski na Mountain Resort dị na Sierra Nevada Natural Park, na ndị ọchịchị nke Monachil na Dílar na naanị 27 kilomita site na obodo Granada. E hiwere ya na 1964 ma nwee kilomita 108 na-agbasa na 115 slopes (16 green, 40 blue, 50 red, 9 black). O nwere egbe canonons 350, ụlọ akwụkwọ iri na ise nke ọkwa niile yana akara abụọ na-eme njem snow na mba ndị ọzọ.
Sierra Nevada bụ ọdụ ọdụ ndịda kachasị na Europe na nke kachasị elu na Spain. Ọdịdị nke snow ya, ọgwụgwọ pụrụ iche nke ugwu ya na oge ezumike zuru ezu bụ nkwupụta kasịnụ maka ndị na-agba ski.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Iso umuaka eme njem » Izu ụka ngwụsị izu na ụmụaka
Ise ebe njem naanị
Mmiri na-ekpo ọkụ na Ourense